မိန်းမငယ်လေးတစ်ဦးဟာ FBSနှင့် Forex ရောင်းဝယ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ! အလွယ်ဆုံး အညွှန်းကိန်း "Moving Average"နဲ့ ရောင်းဝယ်တဲ့ အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေရန် Annကတော့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ကျွန်မရဲ့အဆင့်ဆင့်နဲ့ ရခဲ့တဲ့စုစုပေါင်းအမြတ်ကို ဖော်ပြသွားပါမည်။
သင်မှတ်မိတဲ့အတိုင်း ကျွန်မ အပိုဆုငွေ $၅၀ရခဲ့ပြီး၊ ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံး အရောင်းအဝယ် ၂ရက်တာကာလအတွင်း $၁၁၃ရှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူလဲဆိုတာ သင်စိတ်တောင်ကူးမိမှာမဟုတ်ဘူး! ကျောင်းသူဘဝတုန်းက ပထမဆုံးဝင်ငွေရှာနိုင်တုန်းကတောင် အဲ့လောက်ဂုဏ်မယူခဲ့ဘူး! ကျွန်မဇာတ်ကြောင်း ပထမပိုင်းကိုဖတ်ရန် ဒီကို နှိပ်ပါ။
အရောင်းအဝယ်ဟာ ပိုင်မုန့်လုပ်သလို လွယ်လွန်းတယ်ထင်ရင်၊ သင်မှားသွားပြီ၊ မိတ်ဆွေ! ဒုတိယ Forex သင်ခန်းစာကတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလို ခက်လဲခက်ပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ဖို့နဲ့၊ လျှို့ဝှက်ချက်အသစ်တွေကို ရှာဖွေဖို့အားပေးမှုတွေရခဲ့ပါတယ်! စုစုပေါင်းအမြတ်ဟာ အဲ့လောက်မမြင့်ပေမယ့် သေချာတာတော့ ကျွန်မပိုတော်လာပါတယ်။
အစပိုင်းရှိ အကောင့်ငွေစာရင်း: $၁၁၃ သုံးခဲ့တဲ့ အချိန်: တစ်ရက် ၂နာရီနဲ့ ၂ရက် အဆုံးသတ် အကောင့်ငွေစာရင်း: $၁၄၂
အစကနေ စလိုက်ရအောင်။ FBS သုံးသပ်သူထံမှ – “Moving average” အညွှန်းကိန်းကို လေ့လာရန် အိမ်စာရခဲ့ပါတယ်။ အိုး၊ ဒါက ပန်းချီနဲ့ဒီဇိုင်းပညာဘွဲ့ရထားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်တော့ နားလည်ရခက်ခဲ့တယ်! ဒါပေမယ့် အခက်အခဲအားလုံး ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီး၊ ခုဆို ကျွန်မစွမ်းရည်ကို သရုပ်ပြဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ!
ပထမဆုံး၊ သီအိုရီတချို့ကို ရှာကြည့်ခဲ့တယ်။ *အလွန်လေးနက်သော အသံဖြင့်ပြောခြင်း*: Moving average ဟာ တိကျတဲ့အချိန်ကာလအတွင်း ငွေကြေးအတွဲတစ်ခုရဲ့ ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းကို ဖော်ပြတဲ့ အညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းအောင်ပြောရရင်၊ ၎င်းဟာ နောက်ဆုံး candlestick/ဘားများရဲ့ တိကျတဲ့နံပါတ်ရဲ့ ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းကို ဖော်ပြတာပါ။ သင့်ဇယားမှာ ဒီအညွန်းကိန်းကို ပေါင်းထည့်လိုက်ရင်၊ မျဉ်းတစ်ကြောင်း ပေါ်လာပါမည်။ ဆက်တင်ထဲမှာ MAရဲ့ ကာလနဲ့ ၎င်းအမျိုးအစားကို ရွေးနိုင်ပါတယ်။
ပျမ်းမျှအရွေ့(moving averages) ၄မျိုးရှိပါတယ်။ moving averages ထပ်ကိန်း (အဆ)ဟာ ယုံကြည်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ လက်ရှိလမ်းကြောင်းကို ကြိုမှန်းနိုင်တဲ့အတွက် ၎င်းကိုသုံးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ဇယားမှာ မတူညီတဲ့ကာလများနဲ့moving averages ၃ခုကိုသုံးခဲ့ပါတယ်:
၁) ၈ candlesticks - နောက်ဆုံး candlestick ၈ခု အတောအတွင်း ဈေးနှုန်းရွေ့လျှားမှုကို ဖော်ပြတဲ့ အမြန် MA ဖြစ်ပြီး၊ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲကို အလျင်အမြန်တုန့်ပြန်ပါတယ်;
၂) ၂၁ candlestick - ဒီ MAဟာ ကာလတို လမ်းကြောင်းကို ဖော်ပြပါတယ်;
၃) ၁၀၀ candlesticks - ရေရှည် လမ်းကြောင်းကို ဖော်ပြတဲ့ "နှေးတဲ့" MA ဖြစ်ပါတယ်။
သီအိုရီက ရိုးရှင်းပါတယ်။ ပျမ်းမျှအရွေ့(MA) အားလုံးရဲ့အထက်မှာ ဈေးနှုန်းရှိပါက – ဒါဟာ အဆက်မပြတ် အတက်လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်၊ ဈေးနှုန်းဟာ MAs ရဲ့အောက်ရောက်နေပါက – အကျလမ်းကြောင်းကို မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။
EUR/USD ကို MAs အားလုံးရဲ့အထက်မှာ ရောင်းဝယ်တာကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ "ကောင်းတယ်!" လို့တွေးပြီး၊ အဝယ် အရောင်းအဝယ်တစ်ခုဖွင့်ခဲ့တယ်။ ဈေးတန်းကန်ပြီး အဝင်အဆင့်(entry level)အောက်ကိုဆင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်မရဲ့မရေရာမှုကို တွေးကြည့်ကြည့်ပါ။ ဘာမှားသွားလဲပေါ့? အဲ့နောက် ဈေးတန်းက MA အောက်ကိုရောက်သွားပြီး၊ ကျွန်မ အရောင်း အရောင်းအဝယ်တစ်ခုကိုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ ကျွန်မအရောင်းအဝယ်ကို အမြတ်နဲ့ပိတ်နိုင်ရန် စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။
မတူညီတဲ့ အချိန်ကာလများနဲ့ ပျမ်းမျှအရွေ့များ(MAs)
နောက်ထပ် အရောင်းအဝယ်အချို့ဖွင့်ပြီးချိန်မှာတော့ ဈေးတန်းက MAကိုဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ဟာ အော်ဒါဖွင့်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဆိုတာ သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ အကယ်၍အထက်တက်သွားပါက၊ အဝယ် ဖွင့်ပြီး၊ အောက်ဆင်းသွားပါက၊ အရောင်း ဖွင့်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့အမြတ်တွေဟာ ဖြေးဖြေးချင်းနဲ့ သေချာတက်လာပါတော့တယ်။ ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံသစ်နဲ့ အောင်မြင်မှုကို အောင်ပွဲခံဖို့ ရှန်ပိန်တောင်ဖောက်ခဲ့သေးတယ်!
သင်မြင်တဲ့အတိုင်း၊ ဇယားမှာ အညွှန်းကိန်းတစ်ခုထဲပေါင်းထည့်ထားရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ၎င်းရဲ့ အချက်ပြချက်ကို ဘယ်လို'ဖတ်'ရမလဲဆိုတာ သင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ပျမ်းမျှအရွေ့တွေကို သင့်အတွက်အမြတ်ယူဆောင်စေချင်ရင်၊ ဈေးကွက်ထဲဘယ်ချိန် ဝင်ရမလဲဆိုတဲ့ ဗျူဟာရှိထားဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ဇယားမှာ MAsတွေ အများကြီးပေါင်းထားပြီး၊ အကုန်လုံးကိုအသုံးချပါ! ဒီမျဉ်းတွေနဲ့ ရိုးရှင်းပေမယ့် ထိရောက်တဲ့ အရောင်းအဝယ်ဗျူဟာကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်:
၁။ ၁၀၀-ကာလ MA ကိုကြည့်ပါ။ ဈေးတန်းက အထက်မှာရှိနေရင်၊ ရေရှည် လမ်းကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက်၊ ဝယ်ရန် အခွင့်အရေးရှာပါ။ ၂။ ၈ MA မှ 21 MA အထက်ကိုရောက်သွားရင် ဝယ်ရန် တိကျတဲ့အချက်ပြချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၃။ ၈ MAသည် ၂၁ MA အထက်မှာရှိနေပြီးသား၊ ဈေးတန်းဟာလဲ MAရဲ့အထက်မှာရှိနေရင်၊ ၎င်းကျလာပြီး၊ ပျမ်းမျှအရွေ့ကိုထိလာမည့်အချိန်ကို စောင့်ပါ။ ဒီမျဉ်းကနေ ဈေးတန်းပြန်ကန်တက်သွားပါက၊ ဝယ်ရန် အချိန်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
၈- နဲ့ ၂၁- ကာလ MAs ဟာ ၁၀၀ MAအောက်ရောက်သွားပါက၊ အတက်လမ်းကြောင်းသည် အကျလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲသွားပါက၊ အရောင်းအတွက် စတင်ရှာနိုင်ပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေ!
Stop Loss နဲ့ Take Profit
ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မနည်းနည်း မအားဘူးဖြစ်သွားတယ်။ ဇယားကိုအချိန်မှန် ကြည့်မနေနိုင်တဲ့အတွက်၊ Take Profit နဲ့ Stop Loss ကိုသုံးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အမြတ်ကို မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန် ရယူချင်ပြီး၊ တချိန်တည်းမှာပဲ ရထားတာတွေမဆုံးရှုံးဖို့က ကျွန်မရဲ့အကြီးဆုံးဆန္ဒပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဈေးတန်းရွေ့တာ တကယ်ကိုမြန်တယ်ဆိုတဲ့အတွက် ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဟာ အသင့်ပြင်ပြီး၊ ကြိုပြင်ထားဖို့လိုတာကို နားလည်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ၊ ကျွန်မရဲ့ လျှို့ဝှက်လက်နက်ကတော့ TP နဲ့ SLပါပဲ!
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ (ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်)၊ ကျွန်မရဲ့Take Profit နဲ့ Stop Lossအတွက် နေရာရှာဖို့ ဘာအထူးတလည်နည်းကိုမှ မသုံးခဲ့ပါဘူး။ ရိုးရိုးပဲဇယားကို ကြည့်ပြီး၊ သင့်တော်မည်ထင်တဲ့ နေရာမှာ အော်ဒါထားခဲ့တာပါ။
ကျွန်မ MetaTrader မှ ဖန်သားပြင်
သင့် TP ဟာ သင့် SLထက် ကြီးသင့်တယ်ဆိုတာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေစီမံခန့်ခွဲမှုရဲ့ အဓိကစည်းမျဉ်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ Stop Loss ဟာ ၁၀မှတ်မှာဆိုရင် Take Profit ဟာ ၃၀ မှတ်မှာဖြစ်နေနိုင်တယ်။ ဒီနည်းဟာ အရောင်းအဝယ်တစ်ခုက ဆိုးရွားနေပြီဆိုရင်၊ သင့်အရောင်းအဝယ်ကောင်းကနေ အမြတ်ထဲမှာပဲရှိနေစေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ SL နဲ့ TPအတွက် နေရာရှာတဲ့အခါ၊ ဈေးတန်းဇယားရဲ့ ယခင်က အမြင့်နဲ့ အနိမ့်များကို ကြည့်လိုက်ပါ။ သူတို့နားမှာ သင့်အော်ဒါကို ထားမယ်ဆိုရင်၊ သင့်အရောင်းအဝယ်ဟာ ပိုပြီးအမြတ်ရနိုင်မှာပါ။ စမ်းကြည့်ပါ!
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကျွန်မလည်း လေ့လာချက်အချို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်:
၁။ ဈေးကွက်က ကိုယ့်ဦးတည်ရာအတိုင်းဆက်ရွေ့နေတာကို တွေ့နေရရင်တောင်မှ အမြတ်တွေ လုံခြုံရန် အမြတ်ရနေတဲ့ အရောင်းအဝယ်ကို မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန် ပိတ်ရန်အရေးကြီးပါတယ်။
၂။ ရှုံးတဲ့အရောင်းအဝယ်ရှိလာရင်၊ ဈေးကွက်က ပြောင်းပြန်ဖြစ်လိမ့်မည်လို့ မျှော်လင့်ပြီး မပိတ်ချင်ပါဘူး။ ရလဒ်အနေနဲ့၊ လောဘကြီးမိလို့ ရနိုင်ပါရက်နဲ့ ရှုံးသွားတဲ့အခါတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဟာ အရောင်းအဝယ်ကို အောင်မြင်စေတယ်ဆိုတာ နားလည်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ? အော်ဟစ်ငိုယိုပြီး၊ ဆံပင်တွေကျွတ်ထွက်ကုန်အောင် မဆွဲဘဲနဲ့ပေါ့။
သင်မှန်ပါတယ်၊ ရောင်းဝယ်သူတော်တော်များများ ဒီပြဿနာနဲ့ကြုံရလေ့ရှိတယ်။ ဒါကို ဖြေရှင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းက သင့် TPနဲ့ SL အဆင့်ကိုသေချာရွေးချယ်ထားပြီး၊ ဘယ်လောက်ပဲလုပ်ချင်ချင် သူတို့ကို လုံးဝမပြောင်းလိုက်ဖို့ပါပဲ။ ဒီနည်းနဲ့ သင့်အရောင်းအဝယ်ကနေတဆင့် ကြိုတင်ပြီး သေချာတွေးတောတတ်အောင် ပိုပြီးလှုံ့ဆော်သလိုဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်ပုခုံးပေါ်က ထမ်းထားရတဲ့ဝန်ကြီးပေ့ါသွားသလို ခံစားရလိမ့်မယ်။ အရောင်းအဝယ်တစ်ခုထဲကိုပဲ စွဲလမ်းမနေတော့ဘဲ၊ အခြားစိတ်လှုပ်ရှားစရာ အမြတ်အခွင့်အရေးတွေနဲ့ မလွဲချော်တော့ပါဘူး။
နောက်တစ်ကြိမ် အမြတ်တွေပြန်ရအောင် စီမံနိုင်ခဲ့တယ်၊ ဟေးး! နောက်တစ်ခါဆို ပိုများစေရမယ် (ကတိပေးတယ်!) သုံးသပ်သူတွေပေးတဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို သုံးပြီး၊ အမြတ်တွေကို သုံးဆတိုးစေရမည်!
ခုဆို နိဂုံးချုပ်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။ ရေရှည် အစီအစဉ်နဲ့ ဗျူဟာတည်ဆောက်ခြင်းတို့ဟာ ပိုမြင့်တဲ့ဗဟုသုတအဆင့် လိုအပ်တဲ့အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံလောက်နဲ့ဆို အရောင်းအဝယ်တစ်ခုစီမှာ အမြတ်နည်းနည်းနဲ့ ကာလတို အော်ဒါတွေက ပိုထိရောက်ပါတယ်။ သို့သော် ကာလတိုဆိုတာတောင်မှ MAs လိုအညွှန်းကိန်းတွေကို အကြံဥာဏ်ကြီးတွေရဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ Stop Loss နဲ့ Take Profitဟာ ရောင်းဝယ်သူတွေရဲ့ စိတ်အနေအထားနဲ့ ငွေ (ပြီးတော့ သူတို့ခေါင်းကဆံပင်တွေ) ကိုထိန်းသိမ်းရန် အကူညီပေးပါတယ်!
ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ - ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို မသိဘဲ မရောင်းဝယ်ချင်ဘူးဆိုတာကို သဘောပေါက်သွားတာပါပဲ။ အံ့အားသင့်စရာပဲ! သင်ဟာ အမြဲတမ်း ကံထူးရှင်မဖြစ်နိုင်သလို၊ အရှုံးလဲအမြဲမရှိနိုင်ပေမယ့်၊ သေချာ-စဉ်းစား-တွေးတောပြီး အမြတ်ရလာတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင် Forex ဘုရင်လို့ခံစားရပါလိမ့်မည်! ကွန်ဖြူးရှပ်ရဲ့ ကိုးကားစာတွေရဲ့လေသံပေါက်နေပေမယ့် ဒါဟာ ၁၀၀%အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်!
သင့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်! စိတ်အေးအေးထားပြီး ဆက်လုပ်ပါ! သင့်အိမ်စာအနေနဲ့၊ ဈေးလမ်းကြောင်း မျဉ်းတန်းတွေဘယ်လိုဆွဲရမလဲ၊ support နဲ့ resistance အဆင့်တွေဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာ လေ့လာပါ။